ယူရိုဇုန်CPIဒေတာ (စားသုံးသူများ၏ ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေမှုအခြေအနေ) အကြိုထွက်ရှိမှု
ယူရိုဇုန်၏ နှစ်စဉ်ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာမှာ ၂၀၁၇ဇူလိုင်လအတွင်း ၁. ၃%အထိဖြစ်ခဲ့ပြီး ဇွန်လနှင့်ယှဉ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့ပါသည်. ယခင် တစ်နှစ်အကြာက ဒေတာထက် ၀. ၂%တကလာခဲ့သော်လည်း ဒေတာမှာမငြိမ်သေးပါ.
ဥရောပဗဟိုဘဏ်၏ ငွေကြေးမူဝါဒအသစ်များကို ချမှတ်တော့မည်ဖြစ်ရာ ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာမှာ ယခင်ကထက်ပိုပြီး အရေးကြီးလာခဲ့ပါသည်. CPIဒေတာတက်ခဲ့ပါက EBCအနေနှင့် EURငွေကြေးဈေးကွက်တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် ငွေကြေးမူဝါဒအသစ်များကို ချမှတ်မည့်အလားအလာ ပိုရှိနိုင်ပါသည်. ထို့ကြောင့် စက်တင်ဘာ ၂၉ရက် ၁၂:၀၀ MTအချိန်တွင်ထုတ်ပြန်မည့် ဒေသတွင်း CPIဒေတာကို သတိထားစောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်. EURကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး အမြတ်အစွန်းရှာဖွေနိုင်မည့် အချိန်အခါကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.